रक्षा मन्त्रालय खोसिएका पोखरेल छायाँ प्रधानमन्त्री ! नेपाललाई चित्त बुझाउन रावललाई रक्षा मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद विस्तारमा एक्लिए प्रचण्ड - Artha Path Artha Path
रक्षा मन्त्रालय खोसिएका पोखरेल छायाँ प्रधानमन्त्री ! नेपाललाई चित्त बुझाउन रावललाई रक्षा मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद विस्तारमा एक्लिए प्रचण्ड
काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीविच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद पुर्नगठन गरेका छन । ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाललाई पेल्ने रणनितीका साथ सबै आफ्नै गुटका नेतालाई मन्त्रीपरिषदमा सामेल गराएका छन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सम्पति शुद्धीकरण, राजश्व न्यायाधिकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान व्यूरो ल्याइएको छ । अर्थ र गृह मन्त्रालयले हेर्दै आएका यी विभाग गत वर्षनै ओलीले आफु मातहत ल्याएका हुन । यी विभागको काम फितलो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको भागवण्डा मिलाउन र रक्षा मन्त्रालय पार्टी नेता माधव नेपाल पक्षिय नेता भिम रावललाई दिन ओलीले रक्षा मन्त्रालय खालि राखेका हुन ।
अवको केही दिनमै रक्षा मन्त्रीमा भिम रावललाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्लान बनाएका छन । अवको केही दिनमै पार्टी नेता भिम रावल रक्षामन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । सरकारको पक्षमा चर्को आलोचना गरिरहेका रावललाई रक्षामन्त्री बनाउने प्लान ओलीले बनाएका छन । ओलीले माधव पक्षका सरकार विरोधी अभिव्यक्ति दिनेहरुलाई मात्रै मन्त्री बनाएर बुजो लगाइदिएका छन । कुनैबेला योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल पनि प्रधानमन्त्रीको खुबै आलोजना गर्दै आएका थिए ।
राजश्व विभागको कडा एक्सन ८५ करोड विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने विरुद्ध चलायो
काठमाडौं । भन्सार नतिरी मोबाइल ल्याइ ८५ करोड विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने विरुद्ध राजश्व विभागले
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी
काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा तालाबन्दी गरिएको छ । अस्पतालमा तेस्रो डिन नियुक्त गरिएको
चाडपर्व लक्षित यातायात निर्देशिका जारी
काठमाडौँ । चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई थप सहज, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन यातायात व्यवस्था
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १५ हजार ५ सय कित्ता बिक्रीमा
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलफेन्ट बैंकले १५ हजार ५ सय कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको